Aarogya Setu APK Download ho an'ny Android [Vaovao farany 2022]
Aprily 22, 2022 Janoary 25, 2022 by Shweta Tripathi
Eo am-paran'ny tazan'ny corona, misy zavatra afaka manampy antsika hampitsahatra ny fihanaky ity aretina ity. Aarogya Setu APK izany fampiharana izany miaraka amin'ny hery hampiato ny fihanaky. Ity no rindranasa iray ho an'i India ary azonao alaina maimaim-poana ao amin'ny fanjakana na faritany manomboka any Gujarat ka hatramin'ny AP.
Miely tsirairay avy io olona io ilay olona. Rehefa miteny ara-tsiansa, ny olona rehetra dia mahavita manakana ny fihanaky ny valan'aretina coronavirus any India.
Raha heverinao fa tokony handray ny anjaranao ianao, izay tsy maintsy ataon'ny rehetra. Avy eo alao ny kinova farany an'ny App momba ny areti-mifindra maimaim-poana avy amin'ny tranokalanay mba ho lasa mpiady mavitrika amin'ny fiparitahan'ny COVID-19. Izany dia miasa amin'ny finday sy takelaka Android rehetra.
Inona ny Aarogya Setu?
Ity no fampiharana izay mampahafantatra anao amin'ny tena fotoana raha toa ka namakivaky lalana ianao miaraka amin'ny mpamily mahery ny viriosy.
Manaraka izany ary mampahafantatra ireo mpampiasa azy raha efa nifandray tamin'ny olona mety niatrika test tsara ho an'ny COVID-19 izy. Mampiasa GPS finday sy Bluetooth izany fampiasana izany.
Na ilay olona mpitatitra olona fantatrao na tsia, dia hampahatsiahy anao ny fampiharana tsy ho ela fa voamarina ny toetrany, raha efa akaiky akaiky an'io olona io ianao.
Ny fanairana amin'ny Aarogya Setu APK dia tsy hanambara aminao fotsiny ny amin'ny fifindrana mety. Fa hitari-dàlana anao mandritra ny dingana isan-karazany mba hanatanterahana ny fitokanana-tena sy izay tokony hatao raha misy ny soritr'aretina mitranga eo aminao.
anarana Aarogya setu
Developer Fampiharana finday NIC eGov
Anaran'ny fonosana nic.goi.aarogyasetu
Android takiana 5.0 sy ambony
SOKAJY Apps - Fahasalamana & Fitness
Arovy ny tenanao, ny fianakavianao, ny namana, ny olon-tiana, ary na dia ny fiaraha-monina misy anao. Satria ny olona rehetra dia manana anjara toerana tokony hilalao raha toa ka resy isika. Raha azo antoka ianao dia avotra ny firenena iray manontolo.
Ny hany mila ataonao amin'ny fiarahana-miasa amin'ny fiezahana dia ny fahazoana ny Aarogya Setu APK eto, alaoo, alefaso amin'ny masotinao Android, avy eo apetrakao amin'ny telefaona.
Avy eo ianao hampifandray amin'ireo finday rehetra hafa ao anaty peratra. Raha sendra misy zava-mitranga dia mahatonga anao ho mampiahiahy mpamily. Dia hiresaka aminao eo no ho eo.
Pikantsary amin'ny App
Ity dia rindranasa fanaraha-maso ho an'ny mponina indiana. Mahafantatra anao izany rehefa nahita olona mitondra otrikaretina ianao. Tsy vitan'ny hoe arahana ny torolàlana ho amin'ny fampitokisan-tena sy ny fepetra fisorohana. Ampidino ny APK Aarogya Setu amin'ny alàlan'ny tsindrio ny rohy eto ambany.
Sokajy Apps, Fahasalamana & Fitness Tags Aarogya Setu APK, App momba ny areti-mifindra Post Fikarohana
Animix Apk Download ho an'ny Android [Anime Hub]
Enif TV: Izay rehetra tokony ho fantatrao 